चन्द्र भण्डारीले दिए देउवालाई झड्का ! 'देउवाले नेतृत्व दिन सक्नुहुन्न, तत्काल महाधिवेशन' - भिडियो सहित
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ माघ १ सोमबार |
नेपाली कांग्रेसभित्रको किचलो बढ्दै गएको छ । नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाउने नेताहरु गुटगत रुपमा भेला र बैठक बस्न व्यस्त छन् । युवा नेताहरु समग्र कांग्रेसलाई नै सुधार गर्नुपर्छ भनेर एक किसिमको प्रयास गरिरहेका छन् ।
तर नेतृत्वले कसैको पनि कुरा सुनेको अवस्था छैन । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर ऋषि धमलाले युवा नेता चन्द्र भण्डारीसँग अन्तरवार्ता लिएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि लिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश यहाँप्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाईहरु पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई हटाउने अभियानमा हो ?
विधिवत रुपमा महाधिवेशनले देउवालाई सभापतिमा निर्वाचित गरेको हो । हामीले जबरजस्ती गरेर हुँदैन । हामी त प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई मान्ने हो ।
तर तपाईले सभापति असफल हुनुभयो, राजिनामा दिनुपर्छ भन्नुभएको छ नि ?
जसले पार्टीलाई हाँक्छ, उसले पार्टीलाई विधिवत् रुपमा चलाउन नसकेपछि नेतृत्व छोड्नुपर्छ । उमेर ढल्किदै गएपछि बाबुआमाले छोराछोरीलाई कारोबार हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यो त प्राकृतिक कुरा हो नि । यो त हङ्गामा गराउने कुरा होइन ।
तपाईहरु गफ र भाषण गर्नुहुन्छ । तर काम त गर्न सक्नुभएन नि?
नबोलिकन त कुनै पनि काम हुँदैन । हामीले आफूले पाएको अवसरमा गरेका छौँ । कतिपय कुरा हामीले भन्दा पनि नेताहरु नमानेका कारण बिग्रिएको छ । मैले संविधान बनाउने क्रममा दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्द नराखम भनेरभ नेको थिएँ । तर मेरो कुरा सुनिएन । त्यसैले अहिले सरकार गठन गर्ने प्रक्रियाका बारेमा विवाद भइरहेको छ । धन्न सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुहुन्न भनेर भनेका थियौँ । त्यसकारण अबको सरकार कम्तिमा दुई वर्ष चल्नपाउने भएको छ ।
ठूला नेताहरुलाई विश्वासमा लिएर आफ्ना कुरा लागु गराउन नसक्नु तपाईहरुकै कमजोरी होइन ?
विचार र दृष्टिकोणका आधारमा राजनीति गर्ने भए पो हामीेले कन्भिन्स गराउन सक्छौँ । हाम्रा नेताहरु घटनालाई व्याख्या गर्छन् । विचारमा व्याख्या गर्न नसक्नु नै नेपाली नेताको कमजोरी हो ।
नेपालका युवा राजनीतिज्ञले समय सापेक्ष निर्णय लिन सक्छन् त ?
युवा र पुरानो भनेर छुट्टयाउन हुँदैन । जसको विचार र दृष्टिकोण छ, जुन नेता पारदर्शी छ, उसले पनि समय सापेक्ष निर्णय गर्न सक्छ । अहिले जनता जाडोले पीडित छन् । तर नेताहरुले केही गर्न सकेका छैनन् । मैले त सासंद हुँदा चार वर्षको तलब जनताको सहयोगमा खर्च गरेको छु । यस्तो खालको उत्तरदायित्व भएन भन्न खोजेको हुँ ।
तराई–मधेशका जनता परालको भरमा जाडो कटाइरहेका छन् । कांग्रेसकै नेताहरु पनि गएका छैनन् ।
मैले अहिलेसम्म भनेका कुरा कुनै एक पार्टीका नेतालाई होइन । यो त सैद्धान्तिक कुरा हो । नेपालको नेतृत्व जनताको अभिभावक बन्न सकेका छैनन् । आफ्ना सन्तानलाई पढ्नका लागि विदेश पठाउने, जनताका छोराछोरीलाई काम गर्न विदेश पठाउने । जनताका छोराछोरी पढ्ने स्कुलले दिने शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा ध्यान नदिने,आफ्ना सन्तानलाई विदेशका राम्रा शिक्षण संस्थामा पढ्न पठाउने प्रवृत्ति गलत छ ।
कांग्रेसभित्र मौकामा चौका हान्न सक्ने युवा नेता देखिएनन् नि?
हामीले गर्न खोजेको हो । धेरै प्रयास र मिहिनेत गरेर दबाब दिएका छौँ ।
तपाईहरुको एउटा युवा समुहले नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाएको थियो । तर समकक्षी विश्वप्रकाश शर्मा त प्रवक्ता पो बन्नुभयो त ?
सबै एकैखालका वा एउटै प्रवृत्तिका मान्छे हुँदैनन् । कतिलाई पदको लोभ हुन्छ । कतिलाई सम्पत्तिको लोभ हुन्छ । कसैलाई भविष्यको चिन्ता होला । एउटै विचार हुने भए त ७ अरब जनताको कुरा एउटै हुन्थ्यो नि ?
अब कांग्रेसका युवा नेताहरुबिच बेमेल सृजना भएको हो ?
कुनै पनि झगडा छैन । झगडा र द्धन्द्धले भविष्य छैन । राम्रा कुराका लागि द्धन्द्ध हुनु र नराम्रा कुराका लागि हुने द्धन्द्धबिचमा फरक हुन्छ । कांग्रेसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीहरुबिचमा कुनै द्धन्द्ध छैन ।
तपाईहरु कांग्रेसलाई बदल्न तयार हुनुहुन्छ ?
हामी कुनै हालतमा कांग्रेसलाई बदल्न तयार छौँ । कांग्रेसको नेतृत्व लिने मान्छे विधिबाट चल्नुपर्छ । पारदर्शी हुनुपर्छ । कांग्रेसको गौरवमय इतिहास चकनाचुर पार्न हामी कुनै पनि हालतमा दिदैनौँ ।
कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुलाई बदल्न सक्नुहुन्छ ?
शीर्ष नेताहरुले जीवनमा नेपालका लागि धेरै योगदान दिएका छन् । त्यसलाई आदर गर्नुपर्छ । तर गल्ती पनि गरेका छन् । शुशील कोइरालाले देशलई संविधान दिनुभयो । तर हार्ने चुनावमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुभयो । त्यसो नगरेको भए उहाँ राष्ट्रपति बन्नुहुन्थ्यो । अहिलेसम्म बाँचिरहनुहुन्थ्यो । शेरबहादुर देउवाले संविधानको कार्यान्वयन गर्नुभयो । यस्ता काम नगरेको होइन । तर समय सापेक्ष अरु गर्नुपर्ने काम गर्न सक्नुभएन । थपिएका चुनौतिहरुको सामना गर्न सक्नुभएन । अब उमेरका कराणले पनि सक्नुहुन्न । देउवा त अहिले पार्टी होइन, गुट होइन, गिरोहबाट चलिरहनुभएको छ ।
कांग्रेसमा त धेरै गुट उपगुट छ नि ?
अब हामी विचारले एउटै गुट बनाएर अगाडि बढ्छौँ । अब हामी स्वार्थका लागि भ¥याङ बन्ने होइन, हामी नेपाली कांग्रेस हौँ । अबको नेपाली कांग्रेसलाई कस्तो बनाउने भन्ने चिन्ता हो । गुट उपगुट र भागबण्डामा विभाजित हुनुहुँदैन । धादिङबाट तपाई उठ्न चाहनुभएको थियो । धनराज गुरुङ, गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे लगायतले चुनाव उठ्न चाहेका थिए । तर गुट उपगुटको सिकार भएका कारण राम्रा नेताहरुले टिकट पाएनन् । त्यसैले अब हामी गाउँगाउँमा पुगेर कांग्रेसको संगठन सुधारमा लाग्छौँ ।
केन्द्रिय समितिको बैठक अहिलेसम्म सभापतिले बोलाउनुभएन ?
यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । उत्तरदायी बन्नुपर्छ । यस्तो गैर जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले चल्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो । अब केन्द्रिय समितिको बैठक र महासमितिको बैठक छिटोभन्दा छिटो बोलाउनुपर्छ । शेरबहादुर देउवाले अब नेतृत्व दिन सक्नुहुन्न । अब छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन गर्नुपर्छ । यसका निम्ति सबै नेताहरु एकमत हुनुपर्छ । सफल प्रधानमन्त्री र सफल सभापति देउवाले अब उमेरका कारण नेतृत्व दिन सक्नुहुन्न । उहाँ त अहिले गिरोहबाट चलिरहनुभएको छ । जुन कुरा उहाँ आफैलाई थाहा छैन ।
सरकारले जनताको आशालाई निराशामा बदल्यो : त्रिपाठी
मोदीले ईपीजीको प्रतिवेदन छिट्टै बुझ्नुहुन्छ : सल्लाहकार भट्टराई
अष्ट्रेलियाका ३५ वटा कलेज तथा विश्वविद्यालय एउटै थलोमा : कार्यकारी अध्यक्ष लामिछाने
संचारमाध्यमले तिललाई पहाड बनाउने काम गर्यो : डा. महत
‘मानभवन टोललाई सबैभन्दा अनुकरणीय बनाउनेछौं’ : केन्द्रिय सदस्य लिम्बु
प्रदेश–संघको विवाद समाधान गर्ने सहजीकरण केन्द्रले हो : हृदयश त्रिपाठी
फेरि आयो अर्कै कुरा ! 'प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पूनर्गठन गर्छु भन्नुभएको छैन'
युगले सुम्पिएको उत्तरदायित्व पूरा गर्न कामको गति बढाउनुहोस्: पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताका लागि पत्र लेख्न बाँकी छ : नेता झा
केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग द्वन्द्व निम्त्याउन खोज्दैछ : रमेश लेखक